Ahoana no dehumidifiers miasa?
Dehumidifiers hanesorana hamandoana avy amin'ny rivotra, ary mametraka azy ho mangatsiaka sy hafanana izay mety hanova ny rivotra aloha ny hihaviany amin'ny fanafanana. Ary avy eo dia manao zavona condensing condense eo amin'ny fantsona. Ela ny ela, ny condensate rano hanaisotra ny fandatsahana duct.
Ny dehumidifier no tsy mety miasa, inona no azoko atao?
1). Jereo ny mari-pana isan-karazany, ary ho azo antoka ny plug efa nampidirina marina.
2) .Visit www.alorairsolutions.com ary hiditra Free Registration FAQ rafitra ny fisoratana anarana ny fanontaniana. Ny Sampan-draharahan'ny Fanompoana, dia hifandray anao sy hanome ny vahaolana avy hatrany.
3). Azonao atao ihany koa ny mandefa e-mail amin'ny AlorAir Sampan-draharahan'ny Fanompoana ny adiresy sales@alorair.com raha mila fanazavana fanampiny. Na dia afaka hifandray Distributor eo an-toerana na AlorAir Sampan-draharahan'ny Fanompoana ao amin'ny 888-990-7469 Raha mila fanazavana fanampiny
Inona no tokony hataoko ny feo mafy rehefa fiasan'ny tarika?
Voalohany indrindra, ho azo antoka ny fiasany ny tarika eo amin'ny fisaka sy mafy tany. Faharoa, jereo ny sivana harato mba hahazoana antoka kosa tsy mba hipoka. Raha ny sivana harato dia hipoka, masìna ianao, alao izy ka madio.
Nahazo aho readout karazana fehezan-dalàna momba ny fanaraha-maso ny tontonana. Aiza no mety hahitako ny lisitry ny fahadisoana Laharana?
Error Laharana dia afaka hita avy amin'ny tompony 'boky fampianarana (azo jerena ao amin'ny www.alorairsolutions.com koa eo ambanin'ny Product loharanon-karena, Manuals). Fa hafa fisalasalana, azafady omeo anay ny antso amin'ny 888-990-7469.
Inona no ho fanompoan'ny fiainan'ny AlorAir dehumidifier?
Ny tarika ny fanompoana fiainana dia mety ho 8 taona na mihoatra amin'ny tranga hafa maro.
Inona no fiarovana certifications (taona, ETL, CSA, sns) no AlorAir mitondra vokatra?
Ny sasany ny modely mitondra ny ETL, taona sy Angovo Star taratasy fanamarinana.
Aiza no mety hahitako boky ho an'ny AlorAir fitaovana?
Afaka mahita Zavatra tsy boky eo amin'ny tranonkala. Raha toa ianao ka tsy afaka maka azy, mifandray amin'ny Sampan-draharahan'ny Fanompoana AlorAir amin'ny 888-990-7469. Afaka Fax na handefa mailaka anao ny fanoloana amin'ny tsy mba niampanga.
Misy manakiana hevitra ho an'ny dehumidifier fitehirizana amin'ny ririnina?
Talohan'ny mitahiry dehumidifiers amin'ny ririnina, ho azo antoka ny rano rehetra dia hofiazany avy ao amin'ny tarika. Ankoatra izany, dia ho azo antoka fa ny rano amin'ny tatatra fantsona dia hofiazany mba tsy famoretana. Ny vondrona Tsy weatherized, ka tsy azo hapetraka any ivelany.
Aiza no mety mahazo ny vokatra AlorAir serviced?
Matetika indrindra ny tarika dia azo serviced iray voamarina HVAC teknisianina; dia afaka ihany koa ny hanolotra ny vondrona miverina any amintsika noho ny fanompoana. Mba niantso antsika amin'ny 888-990-7469 mba hahafantatra ny fomba hanombohana ny dingana.
Inona no atao hoe politika ny fiverenan'i AlorAir?
Masìna ianao, manondro ny fiverenan'i AlorAir politika amin'ny tranonkala www.alorairsolutions.com.
Ahoana no fomba tokony ny fitaovana an-tsambo?
Dia mampiseho nandefa ny vondrona amin'ny alalan'ny FedEx Express mpamonjy.